(GMT+08:00) 2018-04-12 17:51:43
မေး-မင်္ဂလာပါဆရာ။<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
မေး-အာရှမီဒီယာများထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာ အာရှမီဒီယာများအတွက် ဘယ်လိုမျိုးစွမ်း ဆောင်မှုရှိမလဲလို့ဆရာ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ-အာရှမီဒီယာထိပ်သီးအစည်းအဝေးပေါ့နော်။Media Leader For Asia Summit မှာ တက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအစည်းအဝေးကနေဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိမလဲ လို့ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဘာပဲပြောပြောအာရှမီဒီယာအချင်းချင်း တွေ့ဆုံ ရင်းနှီးခွင့်ရတယ်။အမြင်ချင်းဖလှယ်ခွင့်ရတယ်။ ထိုနည်း၎င်းပဲ အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်၊ ခေါင်းစဉ်ခွဲ(၄)ခုနဲ့၊ နေရာ(၄)ခုခွဲပြီးတော့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒိဆွေးနွေးခဲ့ကြတာမှာလဲ ဒေသအသီးသီး ကလာတဲ့မီဒီယာသမားများဖြစ်ကြတာနဲ့အညီ မတူကွဲပြားတဲ့ အကြံပြုချက် တွေကိုလဲ သိခဲ့ကြပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့အကြံပြုချက်တွေ ဖြသ်ပေမယ့် အားလုံးကတော့ အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ဒီအာရှစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဲ့ဒီဟာအတွက်ကို.ဒါ.ဦးတည်ပြီးတော့.ဒါ.ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအစည်းအဝေးမျိုးကနေပြီးတော့မှ.ဒီ.အာရှမှပိုပြီးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းတဲ့ဖြစ်ဖို့၊ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အာရှဖြစ်ဖို့၊အာရှနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းကူးလူးဆက်ဆံမှုပိုမိုများပြားဖို့၊နောက်တခါ.အာရှသည် တနိုင်ငံချင်း.တနိုင်ငံချင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနဲ့အာရှကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့.Asia Cultural ကြီး တစ်ခုလုံး ကိုမြှင့်တင်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံကျတဲ့ကိစ္စတွေကို.ဒါ.သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့တော့.အဲ့ဒိ.သဘောတူခဲ့ကြတာနဲ့အညီဒိလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေက၊မီဒီယာတွေရဲ့သဘောတူညီချက် recommendation. ပေါ့နော်။ထောက်ခံတင်ပြချက်အပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်.ခုနပြောတဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအထောက်အကူပြုတဲ့.ဒီ.Summit တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။
မေး-ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒါဆို ဒီအာရှမီဒီယာများထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ပက် သက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်(သို့မဟုတ်)အကြံပြုချက်ရှိမလား။
ဖြေ-အာရှမီဒီယာများထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဓိကအချက်ကတော့..သူတို့..တကယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကတော့မီဒီယာတွေ မှာကြုံတွေ့ နေရတဲ့ Fade News ပေါ့နော်။ဒီအတုအယောင်သတင်းတွေကိစ္စကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ.နော်.Social Media တွေကနေခြိမ်းခြောက်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုပြီး.ဒီ..အကြံပြုချက်တွေလဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကတော့သီးခြားအကြံပြုခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်.အဲ့တာတော့ ဘာလဲဆိုတော့. အာရှ မီဒီယာတွေအင်အားကောင်းဖို့အာရှမီဒီယာတွေ အချင်းချင်းအမြဲတမ်းတွေ့ဆုံနေဖို့ လိုပါတယ်။ထိုနည်း၎င်း.အာရှမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာ.သတင်းစာ.သတင်းပညာကိုဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တကယ့်ကို Professional ism ပေါနော်။သတင်းအတတ် ပညာ ကို.မီဒီယာအတတ်ပညာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စနစ်တကျ
သင်ကြားပေးနိုင် တဲ့.နော်.အာရှစိတ်ဓါတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့.နော်.အာရှယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့သတင်းသင်တန်းကျောင်းကြီးလိုဟာမျိုး၊အဲ့တာမျိုးကြီးတစ်ခု.နော်.တွေ့ဆုံတာ.ဒီ.မီဒီယာတွေတွေ့ဆုံတာတစ်ခု၊ဥပမာအားဖြင့်ပြောခဲ့တာကတော့ Asia Media Academy ပေါ့နော်။AMA လိုဟာမျိုး၊ဒါကတော့နာမည်လေးကတော့လှလှလေးကိုယ့်ဟာ
ကိုယ် AMA ဆိုပြီးပေးတာပါ။အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုတော့အာရှမှာပေါ် စေချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်.ဒီလိုမျိုးပွဲတွေအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံကဦးစီးဦးရွက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်၊ဒီ.သက်ဆိုင်တဲ့ ဒိလိုမျိုး.မိမိနဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ ပူးပေါင်းပြီးတော့. ဒီ အာရှမီဒီယာအကယ်ဒမီဆိုတဲ့အာရှမီဒီယာကျောင်းကြီးတစ်ခုပေါနော်. ဒါမှမဟုတ်လဲ Community တစ်ခုပေါ့နော်။Media Community တစ်ခုလိုအနာဂါတ် တချိန်ချိန်မှာတည်ထောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်.အဲ့ဒိ Community ကနေပြီးတော့ မီဒီယာသမားတွေ၊ဒီလိုတစ်နှစ်တစ်ခါမျိုးတွေ့ တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းပုံမှန်လေး တွေ့ဆုံနိုင်မယ်။ ဆွေးနွေးနိုင်မယ်။ခုနပြောတဲ့တချို့. ဒီ.သတင်းစာပညာကို အခြေခံသင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေ၊ဒါမှမဟုတ်လဲအဆင့်မြင့်သင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေကလဲ၊အာရှနိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားတွေအားလုံးက၊ဒီကြားထဲမှာအားလုံးကျောင်းတက်ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံကြမယ်၊ပညာလဲသင်ကြမယ်၊အာရှလူမျိုးအချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှု၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုလဲအလိုလိုတိုးမြှင့်နိုင်မယ့်သဘောလဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့.ဟို.ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလဲအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။
မေး-ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ၊ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့ကဆရာကပိုအော်အာရှဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒိဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရုတ်နိုင်ငံတော်ဥက္ကဌရှီကျင့်ဖိန်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်။သမ္မတကြီးရှီကျင့်ဖိန်ရဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆရာကဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ။
ဖြေ-ဒီ.သမ္မတရှီရဲ့မိန့်ခွန်းက.ဒီ.သမ္မတဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်.ထပ်ပြီးတော့သမ္မတသက်တမ်းထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာကိုစပြီးတော့.ပေါ့နော်.ဒီ.ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်၊ ခမ်းခမ်း နားနားနဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့.ဒီ.နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များရဲ့ရှေ့မှာပြောတဲ့ပထမဦးဆုံးမိန့်ခွန်းလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့.ဒီမိန့်ခွန်းဟာ.မလာခင်ကထဲကတော့. ဒီ.ပိုအော်ဖိုရမ်မှာ သမ္မတကြီးရှီပြောမယ့်မိန့်ခွန်းကထူးခြားမှုတွေရှိလိမ့်မယ်။နောက်တော့ သမ္မတအဖြစ်နဲ့ ဒုတိယအကြိမ်သက်တမ်းမှာအရွေးခံရတဲ့အချိန်၊နောက်တခါစီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့မောင်းတင်နေတဲ့အချိန်မှာ.ဒီ.သမ္မတသစ်ရဲ့.သမ္မတရှီရဲ့မိန့်ခွန်းဟာ. ဒီ.ထူးခြားမှုတွေ၊���နာက်တခါလေးနက်မှုတွေ၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပါလိမ့်မယ်လို့ နဂိုက ထဲက ယူဆခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုယူဆခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ၊တကယ်လဲနားထောင်ကြည့်တဲ့ အခါမှာသမ္မတရှီရဲ့မိန့်ခွန်းတွေမှာအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနဲ့အချက် တွေ ပေါ့နော်တော်တော်များများသွားတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့.နံပါတ်(၁)ကတော့သူပြောသွားတဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တ့ခါးဖွင့်ဝါဒဟာဆက်စပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။နော်.Opening up ရှိမှ Development ဆိုတာရှိတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ
တာဟာလဲ Opening up လုပ်လိုက်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောတယ်
ဒါတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တာစူနေတဲ့နိုင်ငံတွေ၊တံခါးဖွင့်ရမှာကိုမရဲတရဲဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်၊ဒါတွေဟာဘာပဲပြောပြော.ဒါ.လေ့လာစရာတွေ၊မှတ်သားစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲ.တခြားပြောကြားတဲ့အထဲမှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနောက်တဆင့်အတွက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆောင်ရါက်မယ့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုလဲသမ္မတကရဲရဲတင်းတင်းပြောသွားတယ်။အဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့.ဟို.စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံက၊သူတို့ကန့်သတ်ထားတဲ့တချို့သောကုန်တွေအပေါ်မှာအခါန်စည်းကျပ်မှုကိုလျှော့ချပေးမယ်ဆိုတာ.ဥပမာအားဖြင့်.သူ.သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်လဲပြောတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာဖွင့်ပေးပေမယ့်တချို့နေရာတွေမှာ.သူ.ကန့်သတ်ထားတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့.မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုတို့၊ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းတွေကန့်သတ်ထားတယ်။အခုအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့ချပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပရိတ်သတ်တွေကလဲလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးကြပါတယ်။ဒါ.တော်တော်လဲ.ဒါ.ဟို.ဒီ.မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူတွေ၊ဘဏ္ဍာရေး Sector မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူ
တွေအတွက်.ဒါ.သတင်းကောင်းတစ်ခု.ဒါ.ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့.ဘာလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြတာပေါ့နော်။ပိုငွေကိုအတင်းကြီးကိုပြဖို့သူတို့မကြိုးစားပါဘူးတဲ့။ အဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေး.ဒီဟာကို.ဒီ.Input ပေါ့။တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်ပကနေ တင်သွင်းမယ့်တင်သွင်းကုန်တွေကိုလဲတိုးမြှင့်ပြီးတော့ တင်သွင်းမယ်တဲ့။အဲ့တော့.နိုင်ငံတွေကို သူကတိုက်တွန်းတာကနိုင်ငံတွေ အားလုံး၊ဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့ပို့ကုန်တွေကိုတရုတ်ပြည်ကိုများများပို့ကြပါဆိုပြီးတော့သူကဆော်သြသွားတယ်။အဲ့ဒိဟာကလဲဘာပဲပြောပြောဖွံ့ဖြိုးဖို့နိုင်ငံတွေ၊စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ကုန်မှာအခက်အခဲရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ တရုတ်ကဒီလိုတံခါးဖွင့်ပေး လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့.ဒီ.အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုဟာမျိုးပေါ့နော်၊မြန်မာနိုင်ငံကလဲ တရုတ်ကိုဘယ်လိုပို့ကုန်တွေကိုတိုးချဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့မြန်မာ့စီးပွါးရေးအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Intellectual Property ပေါ့နော်။ဒါ.ဥာဏပစ္စည်းပေါ့။ဒီ
ပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စကိုလဲတိုးမြှင့်ကာကွယ်မယ်ဆိုတာလဲ.ဒါကလဲအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့.ဟို.ဘာပဲပြောပြော.ဒီ.ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အတူ.ဒီ. Intellectual နဲ့ပက်သက်တဲ့ဒီပြသနာတွေ.နော်.ဒါတွေဟာရင်ဆိုင်
နေရတယ်။တချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်.ဒါ.တရားရုံးသွားပြီးတော့တရားစွဲခံရတာတွေ.အပြန်အလှန်ပြသနာလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမယ့်တရုတ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒါကို. Intellectual Property လို.ဒါ တိုးမြှင့်ပေးမယ်လို့ပြောတာဟာ.ဒါ.ကမ္ဘာ
ဒီ.တရုတ်ပြည်ဟာလဲနောက်ထပ်တဆင့်.ဒီ.Development another stage ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော့်အနေနဲ့.ဒါ.မျှော်လင့်ပါတယ်။ယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်။
စစ်သင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့နေရာ၊ဘယ်လိုနေရာမျိုးပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ရောက်ဖူးချင်တယ်။အခုပိုအော်ဖိုရမ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့၊နောက်မီဒီယာ Summit နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ရောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာပါတယ်။ဝမ်းသာတဲ့အ���ါ.ဒီ.ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာ.ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့.အော်.ဘာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဒီနေရာမှာစစ်ပညာသင်တန်းတက်ခဲ့လဲလို့ပြောရင်ဟိုင်နန်ကျွန်းရဲ့ရာသီဥတု၊ဟိုင်နန်ကျွန်းမှာပေါက်တဲ့သဘာဝသစ်ပင်တွေ.နော်.ဒီ.အသီးတွေ၊အရွက်တွေ၊အပင်တွေ၊ပရဆေးပင်တွေ.နော်.ဒါ.အကုန်လုံး.ရေမြေတောတောင်သဘာဝတွေပေါ့နော်.ဒီအားလုံးကမြန်မာပြည်နဲ့တော်တော်ကြီးကိုဆင်ပါတယ်။ရာသီဥတုကမြန်မာပြည်ထက်နဲနဲလေးအေးချင်အေးမယ်.သို့
သွားနေရတဲ့အခါမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာဆောက်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေ၊အသစ်တွေထပ်ဆောက်ထားတာတွေလဲတွေ့တယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ လာရင်းနှီးတယ်ဆိုထဲကိုက.ဒီနေရာမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အလားအလာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့.ဟိုင်နန်ကျွန်းမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သဘာဝအလှတွေရှိသေးတယ်။နောက်.တကယ်ကိုလှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကြီးအကြီးကြီးပေါ့နော်။အခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ.မနေ့ကဆိုရင်.ဒီ.ဟိုဒင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်လေ။ပိုအော်မှာသွားရင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ.ဒီကမ်းရိုးတန်းက.လူတွေကသိပ်မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်.ဒီ.ကမ်းရိုးတန်းကြီးကတော်တော်ကြီးကိုသန့်ရှင်းပြီးတော့သဘာဝအလှအပကိုအပြည့်အဝထိန်းထားနိုင်တဲ့ကမ်းရိုးတန်းအပြည့်ရှိတယ်။သို့သော်တကယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရင်တော့ သဘာဝအလှကိုမပျက်စီးရအောင်ပေါ့နော်.ဘယ်လိုစီမံမယ်ဆိုတာကတော့.ဒါ.နောက်ကျနေတဲ့..နောက်မှလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေက ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ပြသ